GMMA-60L အော်တိုနို့တိုက်ကျွေးဘီဗဲလ်စက် 0-90 ဒီဂရီ - တရုတ်ရှန်ဟိုင်း Taole Machinery
မော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ .: GMMA-60L
GMMA-60L အော်တိုနို့တိုက်ကျွေးရေး ဘီဗဲလ်စက် 0-90 ဒီဂရီ
GMMA-60L အော်တိုနို့တိုက်ကျွေးရေး ဘီဗဲလ်စက် with working range of Clamp thickness 6-60mm, bevel angel 0-90 degree adjustable on metal plate edge beveling & milling for weld preparation. With advantages of high speed and high finishing surface Ra 3.2-6.3, easy processing and adjustable on wide working range. One machine can handle most bevel requrements.
မော်ဒယ်အမှတ် GMMA-60L အော်တိုနို့တိုက်ကျွေးဘီဗဲလ်စက်
ဘီဗဲလ်ကောငျးကငျတမနျ 0-90 ဒီဂရီချိန်ညှိ
အလေးချိန် ဘ 195KGS GW 235KGS
2. "Y ကို", "ဦး", "J ကို 'ဒေါင်လိုက်နှင့်အလျားလိုက်ဘီဗဲလ်ပူးတွဲအမျိုးအစားကွဲပြား," V ကို "ကို process နိုင်သလား
ပိုလုံခြုံနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 4.Cold ဖြတ်တောက်ခြင်း, စွမ်းအင်ချွေတာရေးနှင့်အနိမျ့ဆူညံသံ,
Clamp ထူ 6-60mm နှင့်ဘီဗဲလ်ကောငျးကငျတမနျမြားနှငျ့ 5. Wide အလုပ်လုပ်အကွာအဝေး 0-90 ဒီဂရီချိန်ညှိ
ယခင်: GMMA-60 ပြားအစွန်းကြိတ်စက်
0 င် 90 ဒီဂရီဘီဗဲလ်စက်
Angle Mills စက်ပန်းကန်
အော်တို feed ကို beveling စက်
ဘီဗဲလ်စက် Mills စက်ပန်းကန်
အေး Mills စက်
indexing ပြား Mills စက်
Mills စက် Angle ပြား
ဘီဗဲလ် Mills စက်ပန်းကန်
CNC Mills အားဖြင့်မြင့်ပြား
သံမဏိပြား Edge Mills စက်
Mills စက်သည် Sub ပြား
beveling & ပန်းကန်အဘို့အ GMMA-V2000 CNC စက် ...
GCM-R3T သတ္တုအစွန်းအနားကွပ် chamfering စက်